"Tanjona ny hahatonga ny ANS ho centre de référence" hoy Ranaivoson Patrice tale jeneraly - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
www.lakroa.mg : Andriamatoa Tale jeneraly, manomboka ny taom-pianarana 2015-2016. Mialohan'ny hiresahana ny momba izany taom-pianarana vaovao izany ndao ho fintinina ny taom-pianarana nivalona iny. Nanao ahoana ny tao amin'ny Sport-Etude, ohatra ?
TJ : Raha ny tontolon'ny Sport-Etude manokana dia tsara raha manatona eny amin'ny Minisitera foibe ianareo mpanao gazety. Misy direction misahana azy io ao. Mahafantatra ny vokatra izahay mpiandraikitra eto amin'ny ANS fa tsy anjaranay ny miresaka manokana momba izany. Ny anjaranay eto amin'ny ANS dia ny fampiantranoana an'ireo tanora voaray ao amin'ny Sport-Etude. Anjaranay ny miantoka ny fanomezana azy ireo toeram-ponenana mendrika sy milamina.
www.lakroa.mg : Tsy anjaranareo ANS koa izany ny misahana ny karaman'ireo mpanazatra (entraîneur, encadrement technique) azy ireo toy ny mpanazatra izay voaresaka angazety ny olana mahazo azy ireo ?
TJ : Eny, araka izay voalazanao izay dia tsy anjaranay ny momba ny ireo mpanazatra ireo (karama, fifantenana azy ireo). Soritako fa amin'izao fotoana izao dia eo ampandinihana ny fanatsarana an'ity sport-étude ity ny eo anivon'ny Minisitera foibe.
www.lakroa.mg : Ary raha ny mikasika ny Ecole des sports indray ?
TJ : Iray amin'ireo fandaharana napetrakay eto anivon'ny ANS ny Ecole des sports. Ny tanjona amin'ny Ecole des sports dia mba hananana tanora tia fanatanjahantena ary mahafehy hai-fototra izy ireo fa tsy hanao anjoanjo fotsiny. Misy fanoroana ny fototry ny fanatanjahantena amin'ny ankapobeny ary fampianarana ny fototry ny taranja nofinidin'ny tanora izany. Ny tanjona dia mba ho avy amin'itony Ecole des sports itony no ipoiran'ny mpanao fanatanjahantena sangany na élite eto amin'ny firenena. Ahitana taranja iombonana (foot, rugby, basket, volley, hand) sy taranja ho an'olon-tokana (karate, judo, pétanque, natation, dance, gymnastique au sol) ao anatin'ny Ecole des sports. Manomana ny taninketsa izany hoe politique de la préparation des relèves dans le domaine du sport no antom-pisian'ny Ecole des sports.
Ny fananganana ny Ecole des sports dia mifanindran-dalana amin'ny Sport pour tous. Ny ANS dia mandrisika ny olona tsirairay hanao fanatanjahantena. Samy hafa izany ny Ecole des sports sy ny sport pour tous.
www.lakroa.mg : Isan'ny foto-drafitrasa goavana eto amin'ny ANS ny dobo filomanosana. Nisokatra koa ny fotoam-pilomanosana eto amin'ny ANS. Hita koa fa misy ny fiantsoana ireo teo ho maître nageur na appel à candidature izany. Ny tanjona ?
TJ : Isan'ny kendren'ny ANS ny ho tonga ivotoerana filamatra eto amin'ny faritra Ranomasimbe Indianina na centre de référence régional en matière de formation sur les activités physiques et sportives. Misy ezaka goavana takiana aminay mpitantana ny ANS vao ho tonga amin'izany. Iray amin'ny ezaka tontosaina ny fananana olona mahafehy ny taranja ka raha ny lomano manokana dia misy io appel à candidature io ho an'ny maître nageur. Nisokatra tamin'ny fiandohan'ny volana okitobra teo izy io. Entanina ireo izay liana amin'izany hijery ny antsipiriany ao amin'ny dobo filomanosana ao Ampefiloha. Marihina fa ny dobo filomanosana eto amin'ny ANS dia misokatra ho an'ny rehetra (federasionina, mpianatra na sekoly, daholobe). Misy ny sarany mifanaraka amin'ny filan'ny tsirairay.
Amin'ny volana novambra iny izao dia hisy atrikasa lehibe iray ho tontosaina eto. "Atelier de méthodologie de gestion des centres de sport" no lohahevitr'izany atrikasa izany ary hiarahana amin'ny CONFEJES izy io. Misy koa ny vinavina hafa ho an'ny taona 2016 izay hampahafantarina miandalana eo. Fandaharana matipaika no hapetraka ka na miova aza ny mpitondra efa mipetraka ny fandaharan'asa dia mitohy izany asa izany fa tsy voatery hamerina hatrany amboalohany izay mandimby toerana.